डम्बरकुमारी–गणेश कोइराला आख्यान पुरस्कार ‘रोदन’ लाई – Aajako Khabar: आजै अनि ताजै
डम्बरकुमारी–गणेश कोइराला आख्यान पुरस्कार ‘रोदन’ लाई
काठमाडौँ, २७ जेठ, यो वर्षको डम्बरकुमारी–गणेश कोइराला आख्यान पुरस्कार लघुकथाकार तथा पत्रकार श्रीओम श्रेष्ठ ‘रोदन’ लाई प्रदान गरिएको छ । राजधानीमा आइतबार आयोजित एक विशेष समारोहकाबीच डम्बरकुमारी–गणेश कोइराला साहित्यिक प्रतिष्ठानले सो पुरस्कार ‘रोदन’ लाई अर्पण गरेको हो ।
कथाकार मन्दिरा मधुश्री र कोइराला परिवारको संयुक्त रुपमा स्थापित सो पुरस्कारबाट पुरस्कृत हुने ‘रोदन’ तेस्रो व्यक्तित्व हुन् । यसअघि पहिलो पटक प्रा. मोहनराज शर्मा र दोस्रो पटक साहित्यकार विणा हाङ्खिम पुरस्कृत भइसकेका छन् ।
पुरस्कार ग्रहण गरेपछि बोल्दै आजका सम्मानीत स्रष्टा श्रीओम श्रेष्ठ ‘रोदन’ ले लघुकथालाई पनि आख्यानको विधा मानेर पुरस्कृति गरिदिएको खुसी लागेको बताए । लघुकथा अभियान चलेको २० वर्ष नाघिसक्दा पनि कतिपय साहित्यकारहरुले लघुकथालाई आख्यानको एक विधाको रुपमा स्वीकार्न नसकेको तितो यथार्य प्रस्तुत गर्दै यो पुरस्कारले उहाँहरुमा पनि थप भ्रम चिर्न सकेको उनले बताए । पुरस्कार आफ्नो व्यक्तिगत मात्रै नभएर लघुकथा समाजकै भएको बताए । ‘रोदन’ ले आख्यानको सबैभन्दा छोटो विधा लघुकथाको उन्नतीमा आफू र समाज सदैव लागिपर्न यो पुरस्कारले थप प्रेरणा मिलेको उल्लेख गरे ।
प्रतिष्ठानका अध्यक्ष कथाकार मन्दिरा मधुश्रीको सभापतित्वमा भएको सो कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि साहित्यकार भागिरथी श्रेष्ठ, विशिष्ट अतिथि साहित्यकार एस.पि. कोइराला, अतिथिहरुमा कथाकार माया ठकुरी, साहित्यकार गोविन्द गिरी प्रेरणा लगायतको सहभागिता रहेको थियो । कार्यक्रमका वक्ताहरुले प्रायः पुरस्कारहरु स्मृतिमा मात्रै खडा गर्ने गरिए पनि आफ्ना बुबाआमा जीवित रहँदै स्थापना गरेर मन्दिरा मधुश्रीले प्रेरणाको काम गरेको बताए । यो पुरस्कार वास्तवमा बुबाआमाप्रतिको सम्मान भएको पनि उनीहरुले बताए । आफ्ना बुबाआमाको ६३औँ वैवाहिक वर्षगाँठको अवसर पारेर आइतबार सो पुरस्कार अर्पण गरिएको हो । समारोहमा टीका र माला लगाएर बुबाआमाको वैवाहिक वर्षगाँठ पनि मनाइएको थियो । जसले सभाहलको माहोल नै निक्कै रोमाञ्चक बनाएको थियो ।
प्रकाशित मिति: २७ जेष्ठ २०७५, आईतवार १७:५३ 2018-06-10 , संवाददाता: आजको खबर
Tagged पुरस्कार लघुकथा श्रीओम श्रेष्ठ 'रोदन' सम्मान साहित्य
टेलिकमको अप्टिकल फाइबर नेटवर्क विस्तार धमाधम, १ हजार किलोमिटर नेटवर्क तयार गर्ने लक्ष्य
बालाजुका डेरी उद्योगमा कृषि मन्त्रीको छापा, आधुनिक डेरीको स्टोरमा शिल
‘कृष्णचन्द्रसिंहका निबन्ध’ कृति बारे संवाद
८ बैशाख २०७५, शनिबार १७:२१ 2018-04-21
रवी लामिछानेका नाममा
१८ जेष्ठ २०७५, शुक्रबार २१:०७ 2018-06-01
श्रष्टा पदयात्राको १८ औं श्रृङ्खला सम्पन्न
८ बैशाख २०७५, शनिबार १६:१६ 2018-04-21
Tags: पुरस्कार, लघुकथा, श्रीओम श्रेष्ठ 'रोदन', सम्मान, साहित्य